Ambassador Americo: Nabadeey Kenya, Hello Villa Somalia + Sawirro – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Ambassador Americo: Nabadeey Kenya, Hello Villa Somalia + Sawirro
On Apr 29, 2015 Last updated Apr 29, 2015
Ambassador Mohamed Ali Ameriko waxa uu maalin ka hor inta uusan bannanaynin Xafiiska Safaaradda Somalia ku leedahay magaalladda Nairobi ayuu waxa uu wareysiyo xiriir ah siiyey Suxufiyiin ku soo qulqulaysay Xafiiskiisa.
Xilliga ay Suxufiyiinta la kulmeen Ambassador Ali Ameriko ayaa ku beegan hal isbuuc kadib, markii ay Dagaalamayaasha Alshabaab ku dileen 167 qof weerar ay Waaberi hore ku qaadeen Jaamacadda Garissa ee W/bari Kenya.
Ambassador Ameriko ayaa lagu xusuustaa marki iay Ciiddanka Kenya faragelinta ku soo sameeyeen dalka Somalia sannadkii 2011-kii, waxa uu ahaa Mas’uulkii sheegay mowqifa dalkiisu ka taagan yahay arrintaasi.
Diplomaasigu waxa uu sheegay inay Somalia iyo Kenya isku dan yihiin, wuxuuna xusay inay labada dal wadaahaan xuduud dheer.
“Ciiddanka Kenya waxay Somalia kula sugan yihiin Ciiddanka AMISOM iyagoo taageeraya Ciiddanka Somalia. Annaga kuma dhici doono taatikadda caddowga uu ku doonayo inuu nagu klaa qeybiyo” ayuu xilligaasi yiri Danjire Ali Ameriko.
8 sanno oo uu xilka Safiirka Somalia ee Kenya hayey waxa uu ka tegay Safaaradda, iyadoo aan weli la dirin farriintiisa culus.
Hadadaba haddaynu eegno Taariikh-nololeedka Ambassadorka Waddaniga ee Mohamed Ali Ameriko, waxa uu ku dhashay magaalladda Muqdisho, bishii October 12-dii 1952-kii.
Aabihiisa Cali Nuur waxa uu ahaa nin weyn oo miisaan ku leh Feerka (Boxing), wuxuuna Horjooge ahaan uga shaqeyn jireyShirkad ceelasha qoda.
Aabe Cali Nuur waxa naanaysta Cali Amerika u bixiyey saaxiibkiisa, maadaama uu jeclaa inuu qaato Koofiyadda nooca ay xirtaan Lo’ jirayaasha Maraykanka (Cowboy)-ga.
Waana halkaasi meesha uu Ambassador Mohamed Ali Nuur “Ali Ameriko” uu u sii wato naanaystii loo yaqaanay aabihiisa.
Ambassador Ali Ameriko, waxa ay hooyadiisa geeriyootay isagoo 9 jir ahaa, wuxuuna markii dambe gacan taageero ka helay qaeaabadiisa.
Muddadii uu Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ka talinayey dalkeenna, waxa uu Danjire Ameriko aabihiisa noqday Ganacsade maareyn jirey Baarar ku yaallay Muqdisho iyo goob gawaarida lagu kireeyo.
Markii uu Mohamed Ali Ameriko dhamaystay Dugsiga Sare waxa uu waxbarasho ugu ambabaxay dalka Maraykanka, wuxuuna wax ka soo bartay The Montgomery College in Maryland, kadibna waxa uu galay Jamaacadda The University of Maryland, oo uu ka bartay cilmiga Dhaqaalaha.
Waxa uu Jaamacadda The University of Maryland ka qalin jebiyey sannadkii 1985-kii, wuxuuna dib ugu soo laabtay dalka hooyo, isagoo shaqo ka helay Bangiga Dhexe ee Somalia.
Sannadkii 1986-kii ayaa loo magacaabay Madaxa Waaxda Xisaabaadka ee Bangiga Dhexe ee Somalia, wuxuuna xilkaasi hayey tan iyo markii ay dagaalladda sokeeye ka bilowdeen Somalia sannadkii 1991-kii.
Mohamed Ali Ameriko, waxa uu dib ugu laabtay, kana shaqeeyey dalka Maraykanka, ka hor inta uusan u wareegin dalka Kanada sannadkii 2000.
Sannadkii 1988-kii, isagoo 26-jir ah ayaa waxay xaaskiisa Deeqa u dhashay cunugooda koowaad, iyagoo haatan haysta afar wiil iyo afar gabdhood.
Lammaanahan waxay is guursadeen, kadib, markii ay ku kulmeen Xaflad uu saaxiibkiisa Xafladda Dhalashadiisa ku dhigay magaalladda Muqdisho.
Ambassador Mohamed Ali Ameriko, waxaa uu aad u jecel yahay inuu cinwaankiisa ka dhigto magaca gabadhiisa, Yasmiin oo la dilay xilli ay kooxo hubeysan dhac u geysteen hoygiisa.
Yasmiin waxaa toogtay mid ka mid ah kooxihii dhacayey gurigiisa.
Xusuutii Tiiraanyadda lahayd ee dilkii Gabadhiisa Yaasmiin iyo cafiska uu dalbay mid ka mid ah kooxihii dilay:
Bishii September ee sannadkii 2014-kii, xilli uu Ambassador Ali Ameriko saaxiibadiisa kafeey kula cabayey Xeebta Lido, ayaa waxa dhinaciisa u soo dhaqaaqay nin uusan u aqoonin.
Ninkii ayaa waxa uu weydiiyey inuu yahay Ambassador Ameriko iyo in kale, laakiinse, Danjiraha oo shaki qabay ayaa markii dambe sheegay inuu yahay Ambassador Ameriko.
“Ma garanaysid qofka u uyahay ninka, laga yaabee inuu doonayo inuu ku idlo” ayuu Ambassador Ameriko niyadda iska yiri.
Ninkii ayaa ku yiri:- “Adeer, ma soo fariisan karaa?”, kadibna Ambassadorka intuu yiri “Soo fariiso” ayaa waxaa uu mar kale eego Ninkii, oo ay indhihiisa gaduud ahaayeen.
Ninkii ayaa is-baray Ambassador Ali Ameriko, wuxuuna sheegay in dhawaan laga so otarxiilay Sacuudiga oo dhowr jeer lagu xiray, kuna soo qaatay murugo sannado badan.
Ninkii waxa uu markii dambe uga sheekeeyey Ambassador Ali Ameriko inuu ka mid ahaa dableydii weerartay gurigiisa ee ka dambaysay dhacii iyo dilkii loo geystay gabadhiisa, wuxuuna ka codsaday inuu iska cafiyo.
Ambassadorka markii intaasi loo sheegay waxa uu dib u soo xusuustay dhacdadii 1992-kii, waxa uu u soo sawirantay gabadhiisa oo dhulka taalla.
Mar uu Ambassadorka ka sheekeynayey dhacdadaasi, waxa uu tilmamaay inay indhihiisa gaduud noqdeen, oo ay ilintu ka qubanayso indhihiisa.
Ninkii inta uu jilbnaha qabsaday Ambassadorka ayuu cafis weydiistay, wuxuuna Ambassadorka u sheegay ninkii dilay gabadhiisa inuu cafiyey.
Saaxiibadda Ambassadorka la fadhiday wey yaabeen, xitaa Ambassadorka ayaa ilmeeyey, markii uu Ninkii ka codsaday inuu cafiyo.
Ambassadorka iyo Ninkii intay laabta isa saareen ayuu Ambassadorka u sheegay inuu cafiyey.
Tallaabadda Ambassador Mohamed Ali Ameriko uu ku cafiyey ninkaasi waxay saamayn ku noqotay quluubta dadka Soomaaliyeed oo u baahan Dib-u-heshiisiin iyo Iscafin.
“Soomaalida waxay u baahan tahay Dib-u-heshiisiin, Ninka ii sheegay saas waxa uu qeyb ka yahay dadka dilay gabadheyda.Waan uga mahadcelinayaa inuu halkaasi iigu yimaado, waa geesi” ayuu yiri Ambassadorka oo intaasi ku daray in loo baahan yahay inay dadka isla hadlaan, si loo gaaro Wada-heshiin buuxda.
“Ma oranayo Caddalalad lama damaynin, laakiin dadka wax bay qalbigooda ku haystaan, waxaana loo baahan yahay inay bannaanka u soo saaraan” ayuu yiri Ambassadorka.
Mohamed Ali Amerika iyo Waayihiisa Diplomaasnimo:
Kadib, sannad-guuradii 45-aad ee maalinta Dhalashadiisa oo ku beegnay October 19, 2007, waxa loo magacaabay Danjiraha Somalia ee u jooga Kenya.
Magacaabistiisa ma ahayn dhacdo nasiib iyo mid la sii qorsheeyey.
Shirkii Dib-u-heshiisiinta Somalia ee lagu qabtay Degaanka Eldoret/Mbagathi ee dalka Kenya iyo doorashadii Madaxweynihii hore ee Dowladdii KMG, Marxuum Abdillahi Yusuf Ahmed ee dabayaaqadii sanandkii 2004-tii, waxa uu Madaxweyne Abdillahi Yusuf u doortay Ali Mohamed Ghedi inuu noqdo Ra’isul-wasaare.
Markii uu Ambassador Mohamed Ali Ameriko ku laabtay dalka Knaada waxa uu aabihiisa ka codsaday inuu u Waco Ra’isul-wasaare Ghedi, si uu ugu hambalyeeyo Xilka loo doortay.
Markii Ra’isul-wasaare Ghedi loo gudbiyey Tahniyadda ayaa waxa uu ka codsaday Ambassador Mohamed Ali Ameriko inuu yimaado, si uu isaga ula shaqeeyo.
Ambassadorka ma u malaynin inay arrintaasi tahay Ra’yi Wanaagsan, wuxuuna Ra’isul-wasaaraha u sheegay inuu yahay Saxaibul-ciyaal aan awoodin inuu degdeg u soo ambabaxo.
Maalmo kadib, waxa uu ka soo ambabaxay Kanada, wuxuuna yimid dalka Kenya oo xilligaasi xarun u ahayd Dowladdii KMG.
Waxaa loo magacaabay Agaasimaga Guud ee Xafiiska Ra’isul-wasaaraha.
Markii ay Dowladdii KMG u soo wareegtay gudaha dala Somalia oo ay xarumo ka dhigteen Jowhar iyo Baydhabo, Ambassador Ali Ameriko waxa uu ku sii nagaaday dalka Kenya, wuxuuna ka mid ah koox loo xil saaray dib-u-furista Safaaradda Somalia ee magaalladda Nairobi iyo inay Adeegyadda Qunsuliyadda u fidiyaan Soomaalida ku noolayd Kenya.
Sannadkii 2006-dii markii mar kale dib loo furay Safaaradda Somalai ee Nairobi, waxa loo magacaabay Hawl-fuliyaha Safaaradda.
Sannadkii 2007-dii ayaa waxa Ambassador Ameriko waxaa si rasmi ahaan loogu magacaabay Danjiraha Somalia uga wakiilka ah Kenya.
Ambassador Ali Ameriko iyo Daqiiqaddii ugu farxadda badnayd:
Ambassador Mohamed Ali Ameriko waxa uu sheegay in “Daqiiqadda ugu farxadda badnayd Noloshiisa inay ahayd markii uu Waraaqihiisa Danjirenimo u gudbiyey Madaxweynihii Kenya, Mwai Kibaki oo ay is-gacan qaadeen.
Ambassador Ali Ameriko, waxa lagu amaanaa Hawlihii Taariikhiga ahaa ee uu qbatay muddadii uu Danjiraha ka ahaa dalka Kenya, waxaana lagu xusuustaa:-
· Safaaradda Somalia waxay noqotay halka laga xiriiri jirey QM iyo Hay’addaha kale ee Xafiisyadda ku leh Nairobi, balse ka hawlgeli jirey gudaha dalka Somalia.
· Safaaradda Somalia ee Kenya waxay noqotay Safaaradii ugu horreysay ee laga hirgeliyo Baasaboorka cusub ee Somalia.
· Wax-u-qabashadda Muwaadiniinta Soomaalida ku dhaqan Kenya, gaar ahaan u doodista Qaxootiga oo iyagu raaf kala kulma Boliska Kenya. Waxaana lagu guuleystay inay Hay’addaha QM siiyaan qaxootiga Aqoonsiga Qaxootinimo.
· Soo-celinta Dhismihii Safaaradda Somalia ee Nairobi oo la iibsaday xilligii ay dagaalladda sokeeye ka socdeen dalka Somalia. Dagaal dhinaac Sharciga oo qaatay muudo saddex sanno kadib ayaa dib loo soo celiyey Dhismaha Safaaradaasi oo ah Hanti Soomaaliyeed. Dadaalkaasi waxaa Ambassador Ali Ameriko ka taageeray Ku-xigeenkiisii hore, Mohamed Osman.
Ambassador Americo: Nabadeey Kenya, Hello Villa Somalia
Ambassador Ali Ameriko waxa uu dhawaan sheegay inuu dib ugu soo laabanayo dalka hooyo, waxaana Xaflad Qaabilaad iyo Sagootin ah u sameeyey Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, oo ku ammaanay Danjiraha sida hawlkarnimadda leh ee uu uga shaqeeyey wanaajinta xiriirka labada dal iyo ilaalinta danaha Diplomaasi ee Somalia.
Ambassadorka ayaa ku soo wajahan Muqdisho, waxayna taasi muujinaysaa inuu yahay Halyeey iyo Waddani Daljire ah oo noloshiisa u hibeeyey U Adeegidda Danaha Qaranka Somalia.
Xigasho:- Sahan Journal
Waxaa soo koobay Ustaad Nuradin Abokor Ahmed,
Dalsan Radio, Mogadishu, Somalia
Shirka Wada tashiga Maamul goboleedyada dalka iyo Dowladda dhexe oo maanta ka furmaya Garowe